Google Docs Oo La Sharaxay | Martech Zone
Google Docs Oo La Sharaxay
Arbacada, Janaayo 9, 2008 Talaado, Janaayo 6, 2015 Douglas Karr
Google Docs runtii duco ayey u noqotay shirkadda aan u shaqeeyo. Waxaan nahay shirkad da 'yar oo 5 ah (kaliya ayaa shaqaaleeyay tii shanaad!) Mana hayno adeege ama qalab shabakad wadaag ah. Run ahaantii, uma baahnin mid.
Markii aan bilaabay, dukumiintiyada oo dhan waxaa si fudud loogu gudbiyay emayl waxayna si dhakhso leh u wareereen! Waan xabadeeyay Google Docs oo waxaan bilaabay inaan keydiyo dukumiintiyada… markaa annaga guuray ilaa Google Apps haddana waxaan ku xafideynaa dhammaan dokumentiyadii aan wadaagnay ee ku jiray. Waxaan ku leenahay xubno ka tirsan Dallas, San Jose, iyo Hindiya oo ka shaqeeya Basecamp iyo dukumiintiyadan maalin kasta waana wax cajiib ah!
Marka laga eego dhinaca suuq geynta, waxaan u maleynayaa in Google Docs ay u noqon laheyd ilo aad u wanaagsan nuqulada iyo tifaftirayaasha si ay uga faa'iideystaan ​​marka ay u dhisayaan macmiil. Maaddaama labaduba isla mar wada geli karaan, samee tifaftirro, sheekeysi, iwm.… Waxay u eg tahay aaladda ugu fiican.
Waxaan ogaaday Farshaxanka Guud ee la wadaago fiidiyow kale oo ku saabsan dukumintiyada Google:
Hadaadan is qorin, waa u qalantaa! Ganacsi aad u yar oo leh shaqaale fara ku tiris ah ama shaqaale aan ku oollin bartamaha, waa nidaam weyn.
Dukumiintiyadayada Guud iyo Istaraatiijiyad Geeddi-socod
Basecamp waa meel lagu kaydiyo mashruuca halkaasoo aan kala xiriirno oo aan ku qabanno horumarka mashruuca guud ahaan. Dukumiintiyada Google aad ayey uga wada shaqeeyaan waxayna haysaa taariikhda isbeddelka cajiibka ah, sidaa darteed waxaan u adeegsanaa halkii aan ka isticmaali lahayn Basecamp.
Inta udhaxeysa labadooda, waxaan wali ubaahanahay nidaam maareyn hawleed, markaa tanyada shirkadda isdhexgalka iyo horumarinta aniga ayaa qiimeynaya Atlassian Jira. Waxay umuuqataa nidaam aad ufiican, waan la socon doonaa waana ku ogeysiin doonaa sida ay wax udhacaan!
Tags: Hubinta Noocaliiska hubiBandhiga Raadiyaha MarTech Blogdarajo dabiici ahBixi halkii gujippcsuuqgeynta ppcSliderfalanqaynta warbaahinta bulshadamobaylka fiidiyowga
Qeybta Tijaabada Bulshada, Qeybta Daaweynta Farsamada
Jan 9, 2008 saacadu markay ahayd 7:26 PM
Farriin weyn, Doug. Maalin dhaweyd waxaan lahadlayay mid kamid ah asxaabteyda oo ah nin heysta dukaan yar oo nashqadeeya. Wuxuu la shaqeeyaa qoraa 150 mayl u jira, mararka qaarna wuxuu lashaqeeyaa dadka meelaha fog fog sida Denver. Sidee ayey uga dhigaan inay shaqeeyaan? Google Docs iyo Google Apps. Si tartiib tartiib ah loogu sharraxayo REM, tani waxay noqon kartaa dhammaadka barnaamijka sida aan ognahay, qof ahaanna waxaan dareemayaa inuu fiicanyahay.
Jan 10, 2008 saacadu markay ahayd 10:19 PM
Gabi ahaanba waan ku raacsanahay, laakiin waan sii wadi lahaa oo waxaan dhihi lahaa waxay aad ugu shaqeysaa shirkadaha dhexdhexaadka ah iyo xitaa kuwa waaweyn.
Waxaan marwalba tixgalinayay MS Office codsi "muhiim ah", laakiin saaxiibkay wuxuu isku dayay inuu igu qanciyo inaad samayn karto xafiiska la'aantiis adoo adeegsanaya Google Docs iyo daawadayaasha bilaashka ah ee Xafiiska (tusaale. Dooddiisu waxay ahayd in akhrinta dukumiintiyada aad u isticmaasho daawadayaasha (si fudud looga daawado laba-guji), laakiin sameynta dukumiintiyo cusub waxaad adeegsaneysaa Google Docs. Waan ka shakisanahay maxaa yeelay waxaan ahay isticmaale weyn oo Exel ah, laakiin tan iyo markii aan iibsaday kombuyuutar cusub (Vista, yikes!) Waxaanan u maleynayay inaan jidkiisa isku dayi doono. Waxay qaadatay xoogaa laqabsashada, laakiin hadda waxaan ku qanacsanahay inuu saxan yahay maxaa yeelay waxaan awooday inaan “badbaado” muddo bil ah iyada oo aan wax dhibaato ah jirin.
Saameyn aad u wanaagsan ayaa ahayd inaan ogaaday inta jeer ee dukumiintiyada runtii loola jeedo in lala wadaago. Hadda waxaan joogaa meeshii aan runtii ka niyad jabsanaa markii dadku u soo diraan xaashiyaha 'Excel' ee hareeraha ujeeddooyinka wada-shaqeynta emaylka. Waa waxtar la'aan maxaa yeelay marna ma ogaan kartid nooca ugu dambeeya. Mid ayaa ku doodi kara in server-ka Sharepoint uu xalliyo dhibaatooyinkaas, laakiin maahan markii aad leedahay isticmaaleyaal fog / ka go'ay oo aan ku xirmi karin server-kaaga Sharepoint.
Beddelaadani waa mid aad ugu adag dadka isticmaala jawi shirkadeed, sababo kala duwan awgood, laakiin weli waxaan arkayaa in badan oo adeegsadayaasha shirkadaha ah oo adeegsanaya barnaamijyada ku saleysan Webka.
Sidaad u fasirtay, "Waa dhammaadkii barnaamijka sida aan ku naqaano, oo anigu .." 🙂
Waxaan wadnaa shirkad yar oo isku mid ah isla markaana deeqda Zoho aad ayey noogu habboon tahay http://writer.zoho.com si aad ugu dhowaato muuqaalka MSWORD xikmad badan.
Sidoo kale waan jeclahay Google Docs, laakiin ma jecli Basecamp. Waan ka door biday Doqon. Qalabyadu aad ayey u habboon yihiin, maadaama aad iskaashi la samayn karto dad badan oo aad rabto oo dhammaantoodna waxay heli doonaan koontooyin bilaash ah.
Feb 23, 2009 markay ahayd 11:55 PM
Waxaan ku guda jiraa cilmi baaris ku saabsan sida SMBs ay u adeegsadaan barnaamijyada google-ka iyo maxay yihiin dulduleelo. Fadlan wax ka qor khibradaada isku darka JIRA.